Iindlela ezisisiseko zokutyhila amandla akho ngokupeyinta i-watercolor | Izidalwa ezikwi-Intanethi
«I-vase ene-watercolor» yi-Aracelyasmine inelayisensi phantsi kwe-CC BY-NC-ND 2.0
Abazobi abaninzi kwimbali baye bakhohliswa bubugcisa be-watercolor. Kwaye yile, obu buchule, unokwenza imisebenzi emihle yobugcisa ngokululaYimathiriyeli enamathuba amakhulu okudala.
Kodwa yenziwe ngantoni? I-Watercolor yenziwe nge-pigment, inani elincinci le-binder (elihlala li-rubber), kunye ne-thinner (amanzi). Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nokwakheka kweepeyinti ezahlukeneyo, ungaphoswa le post yangaphambili.
Umgangatho ofanelekileyo ukuqala ukupeyinta nge-watercolor liphepha. Kukho iintlobo ezininzi zamaphepha, into ebalulekileyo kukuba banako ukufunxa amanzi kakuhle, ke ngoko kufuneka babe ziigrama eziphezulu, ukuqala nge-190 yeegram. Ephakamileyo igrama, ngakumbi baya kuxhasa amanzi. Ukongeza, kuxhomekeke kubume bayo, zintathu iintlobo zephepha elifanelekileyo:
Iphepha elibandayo: ibonelela ngobuninzi bokubumba njengoko bunesiqingatha.
Iphepha elishushu elishushuUbunzima kunye nomphezulu ogudileyo, owenza ukuba i-watercolor ityibilike.
Iphepha elirhabaxa: yegranulation enkulu, ukufumana imbonakalo enamachaphaza xa ufaka ipeyinti.
Kuxhomekeke kwinto ofuna ukuyenza, kuya kufuneka usebenzise enye okanye enye.
Okulandelayo siza kwazi iindlela ezithile ezisisiseko onokuthi uzisebenzise ukwenza imizobo ebabazekayo ngendlela elula.
1 Ukuhlamba iflethi okanye ukuhlamba okucaba
2 Emanzi kowomileyo okanye omanzi kowomileyo
3 Manzi kumanzi okanye kumanzi kumanzi
4 Ukuhlamba kwegradient okanye ukuhlamba okuhleliweyo
5 Ibrashi eyomileyo okanye yokuhlamba eyomileyo
6 Ukusetyenziswa kwetyuwa
7 Ukusetyenziswa kwe-ethyl alcohol okanye ukurabha utywala
8 Sebenzisa inaliti okanye iscraper
9 Ukusetyenziswa kweplastiki
Ukuhlamba iflethi okanye ukuhlamba okucaba
«# 71» nguViviRibS inelayisensi phantsi kweCC BY-NC-SA 2.0
Yeyona ndlela isetyenziswayo kwi-watercolor. Inyaniso yokuntywila ibrashi emanzini kwaye emva kwepeyinti ukuyisa ephepheni kukuhlamba. Oko kulula Ukuba ufuna ukwenza umphumo ongafihliyo, kuya kufuneka ulayishe ibrashi ngamanzi amaninzi. Ukufumana imibala egcweleyo, vele ulayishe amanzi amancinci kunye ne-pigment. Amathuba anokuphela.
Emanzi kowomileyo okanye omanzi kowomileyo
Kuqala ukuhlanjwa okusicaba kwenziwa, kwaye xa kusomileyo, kufakwe omnye umaleko, ngendlela yokuba kubonakale ukukhanya, ukuze ukwazi ukubona umaleko ongezantsi.
Manzi kumanzi okanye kumanzi kumanzi
Siqala ukuhlamba tyaba kwaye, phambi kokuba yome, sithatha omnye umbala kwaye sipeyinte ngendlela yokuba ngaphezulu okanye ngaphezulu ingaphezulu ngaphezulu kowokuqala. Imibala iya kudibanisa kunye nokwenza iziphumo ezintle.
Ukuhlamba kwegradient okanye ukuhlamba okuhleliweyo
Olu hlobo lobuchule lusibonisa utshintsho olusuka kwindawo egcwala kakhulu yamanzi ukuya kwinto ekhanyayo ngakumbi. Ukwenza ngokuchanekileyo, kufuneka kuqala sithathe i-pigment eninzi kunye namanzi amancinci, senze umgca kwelinye icala lephepha. Emva kwexesha sithatha i-pigment encinci kunye namanzi amaninzi, senza omnye umgca ojoyina owedlule kumda wayo. Zombini ziya kudityaniswa. Ngokuthe ngcembe sithatha i-pigment encinci kunye namanzi amaninzi, ngaloo ndlela senza isiphumo esihle segradient.
Ibrashi eyomileyo okanye yokuhlamba eyomileyo
Ngomthwalo wamanzi ubuncinci (ibrashi yomile) kunye ne-pigment eyaneleyo, sinokupeyinta ephepheni ngendlela eya kuthi ibhalwe ngayo.
Emva koko siza kubona ezinye izixhobo zokuncedisa esinokuzisebenzisa kwiimvalo zethu zamanzi.
Ityuwa idala iziphumo ezimangalisayo kwi-watercolor. Ukuyisebenzisa ngokuchanekileyo, siqala ukuhlamba tyaba kwaye sibeke ityuwa ngendlela esasaziweyo phambi kokuba ipeyinti yome. Xa sele somile ngokupheleleyo, singayisusa ityuwa. Iziphumo zilungele ukupeyinta, umzekelo, iphela.
Ukusetyenziswa kwe-ethyl alcohol okanye ukurabha utywala
Utywala i-Ethyl ikwenza iziphumo ezinomdla kwi-watercolor. Ngoncedo lwe-swab, siyifaka kwipeyinti emanzi (ubuchule bokuhlamba tyaba). Yintoni eya kwenzeka kukuba zombini ezi zinto ziya kugxothana, zidale iindawo ezichithakeleyo kunye nezinye ezinombala ongaphezulu.
Sebenzisa inaliti okanye iscraper
Xa i-watercolor isemanzi, siyayikrwela inaliti okanye esinye isixhobo esinokudala imitya. Ngale ndlela sinako, umzekelo, ukuzoba imigca yamagqabi esityalo.
Sebenzisa iphepha elidibene ngaphambili leplastiki, sinokunika ipeyinti emanzi ngokuyinika into encinci. Iplastiki iya kuthatha ipeyinti ephepheni, idale into enomdla.
Kwaye wena, ulinde ntoni ukuzama zonke ezi ndlela?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Iindlela ezisisiseko zokutyhila amandla akho ngokupenda i-watercolor
Iwao Takamoto, xa ufunda ukuzoba kwinkampu yoxinaniso ngexesha leMfazwe yesibini (II) yeHlabathi
Iindawo ezikufutshane zizele bubugcisa basezidolophini obuya kukumangalisa